Iqhawe likaMarginalia ligugu elincinci lokufumana ngobugcisa bexesha eliphakathi | I-Androidsis
Iqhawe likaMarginalia yimpazamo ye-RPG apho unyango olugqithisileyo lwenziwe kwinqanaba lomzobo. Uyilo olubonakalayo olusikhokelela kwimifanekiso ebonakala ngathi ithathiwe kuloo mizobo yayihlala inqabileyo kunye nezindlu ezinkulu zeenkosi.
Umdlalo okhetheke kakhulu, kungekuphela kunyango olubonakalayo, kodwa indlela yakhe yokuqonda i RPG ukusuka kumbono osisiseko: ukwazi ukuba ucofa njani kumzuzu ofanelekileyo ukuze ubethe umdlali welinye iqela. Kwaye oku kuyakwenziwa ngomatshini ongenakuba lula. Makhe sibone ukuba njani.
1 Ngokusekwe kumaqhosha achanekileyo
2 Imiceli mngeni kwiqhawe laseMarginalia
3 Isacholo esincinci kwisithsaba
Ngokusekwe kumaqhosha achanekileyo
Iqhawe likaMarginalia ngumdlalo i-agile, yoqobo, inomdla kakhulu Kwaye xa iyonke izisa into eyahlukileyo kwinto esiqhele ukuyisebenzisa kwezi ndawo zokudlala kwi-smartphone. Ngaphandle kwento esele ithethiwe malunga nalo mzobo wamandulo apho abalinganiswa babonakala kakuhle, sinomatshini womdlalo ongenakuba lula kwaye ube lula.
Kuya kubakho a isangqa esipeyintwe embindini wesikrini ngesixhobo sethu silandela ulwalathiso lwewotshi yezandla, ukuze mzuzu xa sibona into ekujolise kuyo ivele, sicinezela ngokukhawuleza ukubetha, ukuba kunokwenzeka, embindini wayo. Ukusuka kulo makhenikhi siya kumdlalo oya kuthi, nangona ungabonakala ukhululekile kwaye uzolile, uya kusibeka ngaphezulu kwesihlandlo esinye ngokuchasene neentambo.
Ndiyathetha, ezo iithagethi ziya kuvela zingashukumi ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye, sinyamalale phambi kwethu ukuze sikhe sicinge ukuba siza kubetha phi, okanye sitshintshe nje icala ukuze sikwazi ukumamela xa kufuneka sicofe ikhusi.
Imiceli mngeni kwiqhawe laseMarginalia
Kwaye yintoni eyayibonakala ngathi ngumdlalo ongazukuzinikezela, iba gem kancinane ukuthanda kunye nokuzala ezandleni zethu, kodwa iminwe. Siza kuphakama, sifumane imali ngakumbi kunye nokufikelela kwimiceli mngeni eya kwenza izinto zibe nzima kuthi. Le mingeni ivelisa ingeniso engaphezulu. Ingeniso esiya kuyisebenzisa ukuphucula iqela lethu.
Iqela elinokuvela ikrele elithatha umboko, okanye kwaneendlela ezintsha zokuzikhusela esinokuthi sibe nazo ithuba lokungaphumeleli ekuqhubekeni sizama ukubulala zonke ezo ntshaba zisiza kuthi. Izidalwa kunye nezilo ezenza amanqanaba angama-200, malunga nezinto ezingama-70 ukwenza ngokwezifiso nokuphucula kunye neempumelelo ezingama-50 ukwanelisa umnqweno wethu wokugqiba iqhawe laseMarginalia.
Zonke zenzelwe ngokufanelekileyo zisa intsebenzo entle kuwo onke amanqanaba kunye nesandi esihamba kunye nayo. Kananjalo kufuneka kuthiwe ubunzima bufezekiswe kakuhle ukuze singadikwa okanye sibushiye bunzima njengoko bunokuba njalo.
Isacholo esincinci kwisithsaba
Ukuba sele sibona ukuba iCrescent Moongames isemva, yaziwa ngokuba yingcali kwimidlalo ehambayo, kwaye phakathi kwengqokelela yakheokanye unezihloko ezifana neDeer GodSingaqonda ukuba kukho umzamo omkhulu owenziweyo ekwenzeni iMarginalia Hero ibe yenye yeemidlalo zonyaka kwaye inokuthandwa ngabadlali bokwenyani.
Ngokobuchwephesha izuzwe kakuhle kakhulu, kunye nesimbo sokubonakalayo sime ngokungathi umzobi wexesha eliphakathi ubedlulile kule studio yemidlalo yevidiyo kwaye washiya uphawu. Kukwafanelekile ukuqaqambisa umculo kunye nesandi sokugqibezela umdlalo esiba yigugu elincinci ukonwabela. Ukuba ufuna ukumka ezo PUBG Mobile y Fortnite, ngumdlalo ogqibeleleyo.
IMarginalia Hero ngumdlalo owahlukileyo ekubuyisela kumaxesha aphakathi ukulwa ngamakrele ukusuka kwindlela yoqobo kwaye yahlukile kwinto ebonwa ngoku kwimidlalo emininzi ye-smartphone yakho. Ifumaneka simahla kwiGoogle Play Store, nangona ikwi-beta kwaye unokhetho lokongeza umxholo.
Umxholo oza kuvulwa
I-flowkey: Funda ipiyano
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iqhawe likaMarginalia yiRPG ekhethekileyo kunye nesitayile esibonakalayo esenziwe ngamagcisa aphakathi
Isiqwenga seFayile Explorer !!